ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपरे पार्टी नै फुटाउने - aajakoparibesh
ओली- मोदी फोन बार्ता
ओली र प्रचण्ड सहमति नजिक:मन्त्री फेरबदलदेखि बिचारधारा परिवर्तनसम्मको एजेन्डा
आज देशका यि ठाँउमा भारी वर्षा हुने सम्भावना
अबको महाधिवेशनमा गगन थापा महामन्त्री कि सभापति ?
बार्सिलोनाको बायर्न म्युनिखसँग ८-२ को लज्जास्पद हार!!
पाथिभारा मातालाई ॐ जप्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस्।
कोरोना संक्रमण तिब्र बढेपछि काठमाडौ उपत्यकामा कडाई
जसलाई हाम्रो खोपमा विश्वास छैन तिनीहरुलाई आँफै बनाउ ‌- रुस
बाराही खाद्य उद्योगको अनुरोध
नेकपामा बिबाद समाधान गर्न कार्यदल गठन, कोको छन त कार्यदलमा ?
ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपरे पार्टी नै फुटाउने
आजको परिबेश Saturday, July 4th, 2020
काठमाडौं। ‘ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपरे पार्टी नै फुटाउने’ तयारी गरिसकेको निष्कर्ष उनको विरोधी समुहले निकालेको छ । आज तीन घन्टा बालुवाटारमा छलफलपछि प्रचण्डले यही आशय आएको आफ्ना निकटस्थहरुसँगको छलफलमा भनेको बुझिएको छ ।
उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले नेकपा एमाले पार्टी दर्ता भइसकेको र त्यो ओलीको योजनामा भएको खुलाइसकेका थिए । नभन्दै पार्टी फुटाउन सजिलो बनाउने गरी अध्यादेशको तयारी गरियो । संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरियो । यसका पछाडि नयाँ दल दर्ता गर्ने अध्यादेश ल्याउने उद्देश्य रहेको छ । यसरी ओलीले प्रधानमन्त्री नछाड्ने बरु पार्टी फुटाउने सम्मको तयारी गरेका छन् ।
महिला समाजको ऐना हो
ओली प्रचण्ड बार्ता निरन्तर: आज पनि बार्ता गरिदै ।
महाधिबेशन‌ बाट प्रचण्ड एकल अध्यक्ष बन्ने गरी ओली प्रचण्ड सहमति नजिक
©2018- 2020, आजको परिवेश सर्बाधिकार सुरक्षित